Maxaa Cusub – Page 51 – Shabakadda Amiirnuur
Dagaal Askar lagu dilay oo ka dhacay Bariire.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday deegaanka Bariire oo ay ku suganyihiin ciidamo katirsan kuwa dowladda iyo Shisheeyaha. Dagaalka oo ahaa mid culus, la iskuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada huwanta ah ee ku sugan. Warar ay heshay Idaacadda islaamiga ee […]
Afhayeenka Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cabdil caziiz Abuu Muscab ayaa qabtay shir jaraa’id oo uu kaga hadlay howlgalladii ugu dambeeyay ee ay ciidamada Mujaahidiinta ka fuliyeen NFD Iyo Soomaaliya. Sheekh Abuu Muscab, wuxuu si gaar ah usoo hadal qaaday howlgalladii u dambeeyey ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay dhulka […]
Al-Shabaab oo Meel U Dhow Afgooye Ku Dilay Askari DF Ka Tirsan Kana Qaatay Qorigiisii.
Ciidamo ka tirsan kuwa Xarakada Al-Shabaab ayaa barqanimadii maanta weeraray meel isbaaro u tiilay ciidamada DF oo u dhow degmada Afgooye. Askartan la weeraray oo inta badan dadka ku isbaareysta duleedka tuulada Cumar Beerre ayaa waxaa laga dilay hal askari kaasoo ay meydkiisii iyo hubkiisiiba qaateen ciidamada Xarakada Al-Shabaab. Al-Shabaab […]
Wararka ka imaanaya dhulka Soomaali Galbeed ee ay Xabashidu gumeysiga ku heysato ayaa waxay sheegayaan in shil gaari oo ka dhacay magaalo hoos timaada gobolkaas, kaasoo sababay khasaare soo gaaray inta badan dadkii rakaabka ahaa. Gaari weyn oo Bas ah islamarkaana kasoo baxay Qabridaharre kuna sii jeeday Jigjiga ayaa xilli […]
Maxkamad Ku Taalla Mareykanka oo In Ka Badan 10 Sano oo Xabsi Ah Ku Xukuntay Muwaadin Soomaaliyeed.
Maxkamad ku taalla magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay lasoo taagay muwaadin Soomaaliyeed oo intuu qaatay dhalashada Mareykanka haddana kamid noqday ciidamada Boliska ee dalkaasi. Ninkan oo lagu magacaabo Maxamad Nuur ayaa lagu eedeeyay inuu dilay haweeney u dhalatay dalka Australia xilli uu ku jira hawl […]
Inkabadan 10 Askari Jabuutiyaan ah oo lagu dilay Hiiraan.
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha dalkeena Soomaaliya ayaa ku waramaya in ciidamada Jabuuti khasaare culus lagu gaarsiiyay howlgallo lagula beegsaday gobolkaas. Saddex qarax oo aad u culus ayaa lagu weeraray ciidamada Jabuuti ee heysta degmada Jalalaqsi, waxaana gaaray khasaare nafeed oo aad u badan. Inta la xaqiijiyay 13 […]
DEGDEG: Al-Shabaab oo weeraray Jabuutiyaanka Heysta Jalalaqsi.
Ciidamo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada Jabuuti ee heysta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Wararka halkaa naga soo gaaraya ayaa sheegaya in Jabuutiyaanka lagu helay meel u dhow buundada magaalada halkaasoo uu dagaal ka dhacay, balse ugu dambeyntii Jabuutiyaanka ayaa ku qasbanaaday iney goobka ka […]
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo qaataa mowduuc muhim ah. Halkan Ka Degso Diiradda Jimcaha oo Tayo Sare ah 07-06-2019 Halkan Ka Degso Diiradda Jimcaha oo Tayo Dhexe Ah 07-06-2019
Daawo Saakow Iyo Sida Looga Ciiday.
Degmada Saakow oo ka tirsan Wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka ayaa maanta si heer sare ah looga ciiday, dadkuna waxay ku dukadeen fagaare weyn oo magaalada ku yaalla. HOOS KA DAAWO SAWIRRADA.
Magaalada Buq Aqablle ee gobolka Hiiraan bartamaha dalka Soomaaliya ayaa kamid ah meelaha sida aadka ah looga dabaal degay munaasabadda Barakeysan ee Ciidul Fidriga, kumanaan qof ayaa fagaaraha weyn ee magaalada ku tukaday. Mas’uuliyiin katirsan wilaayada Islaamiga Hiiraan ayaa shacabka laciiday, carruur iyo ciroole ayaa la arkayay iyagoo Buq Aqable […]